ဆယ်စုနှစ်စာ ဘောလုံးကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးတဲ့ မက်ဆီနဲ့ ရော်နယ်ဒို – Premier League Special
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးသမိုင်းနဲ့စစ်တမ်းဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ချုပ်က ပေးအပ်တဲ့ ဆုတွေကို ရော်နယ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ ကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကနေ ၂၀၂၀ အတွင်း မှာ အကောင်းဆုံးPlaymaker အဖြစ် သတ်မှတ် ခံခဲ့ရ ပါတယ် ။ ရော်နယ်ဒိုကတော့ ၁၀ နှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်ဆုကို ရထားတာပါ။
IFFHS ဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာ ကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို အကဲဖြတ်ပြီး အမှတ်စနစ် နဲ့ အဆင့် သတ်မှတ် ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၀အပြီးမှာတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာရမှတ်တွေကို စုပေါင်း တွက်ချက် ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်အရဆိုရင် ပထမနေရာကို ၂၀မှတ်ပေးပြီး ဒုတိယ ၁၉မှတ်စသဖြင့် တစ်မှတ်စီလျှော့ပြီး အဆင့်၂၀အထိသတ်မှတ်ပါတယ်။မက်ဆီကတော့ စုစုပေါင်း ရမှတ် 174 မှတ် နဲ့ ပထမ နေရာမှာ ရပ်တည် ခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီဟာ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၉တို့မှာ အကောင်းဆုံးပလေးမိတ်ကာဆုကို ရရှိခဲ့တာပါ။
မက်ဆီ ရဲ့ နောက် မှာတော့ ဘာစီလိုနာ အသင်းဖော်ဟောင်း အန်ဒရေ အင်နီယေစတာ က ရမှတ် ပေါင်း 127 မှတ် နဲ့ ဒုတိယ နေရာကို ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုကြားမှာ ဘလွန်းဒီအောဖြတ်ယူနိုင်တဲ့တစ်ဦးတည်းသောကစားသမား လူကာမိုဒရစ်ကတော့ 113 မှတ် နဲ့ တတိယဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်တန်းကစားသမား ရော်နယ်ဒို ကတော့ ဆယ်စုနှစ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး Playmaker ဇယား မှာ 54 မှတ် နဲ့ အဆင့် ၁၂ နေရာကိုသာ ရယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအနေအထားကလည်း မဆိုးပါဘူး။ ဆယ်စုနှစ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး Playmaker အယောက် ၂၀ကတော့ 1. မက်ဆီ – 174မှတ်၊ 2. အင်နီယေစတာ – 127မှတ်၊
3. လူကာမိုဒရစ် – 113 မှတ်၊ 4. ကီဗင် ဒီဘရိုင်းနား – 103 မှတ်၊ 5. တိုနီခရူးစ် – 90မှတ်၊ 6. အီဒင် ဟာဇက် – 77 မှတ်၊ 7. နေမာ – 71 မှတ်၊ 8. အိုဇေးလ် – 69မှတ်၊ 9. အန်ဒရေ ပီယာလို – 63မှတ်၊ 10. ယာယာတိုရေး – 60 မှတ်၊ 11. ဇာဗီ – 55 မှတ်၊ 12. ရော်နယ်ဒို – 54မှတ်၊ 13. ဒေးဗစ် ဆေးဗား 52 မှတ်၊ 14. ရိုဒရီဂွက် – 42 မှတ်၊ 15. ရှဝိန်းစတိုင်ဂါ – 40 မှတ်၊ 16. အဲရစ်ဆင် – 38 မှတ်၊ 17. မာရတ်ဇ် – 38 မှတ်၊ 18. ပေါ့ဘာ – 35 မှတ်၊ 19. တီယာဂို အယ်ကန်ထရာ– 33 မှတ်၊ 20. အစ္စကို – 25 မှတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကမာၻ႔ေဘာလုံးသမိုင္းနဲ႔စစ္တမ္းဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေပးအပ္တဲ့ ဆုေတြကို ေရာ္နယ္ဒိုနဲ႔ မက္ဆီတို႔ ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာစီလိုနာ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မႉး မက္ဆီ ကေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကေန ၂၀၂၀ အတြင္း မွာ အေကာင္းဆုံးPlaymaker အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံခဲ့ရ ပါတယ္ ။ ေရာ္နယ္ဒိုကေတာ့ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ထိပ္တန္းဂိုးသြင္းရွင္ဆုကို ရထားတာပါ။ IFFHS ဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမွာ ကစားသမားေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို အကဲျဖတ္ၿပီး အမွတ္စနစ္ နဲ႔ အဆင့္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၂၀အၿပီးမွာေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာရမွတ္ေတြကို စုေပါင္း တြက္ခ်က္ ခဲ့ၿပီး အေကာင္းဆုံးကစားသမားေတြကိုထုတ္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။
စနစ္အရဆိုရင္ ပထမေနရာကို ၂၀မွတ္ေပးၿပီး ဒုတိယ ၁၉မွတ္စသျဖင့္ တစ္မွတ္စီေလွ်ာ့ၿပီး အဆင့္၂၀အထိသတ္မွတ္ပါတယ္။မက္ဆီကေတာ့ စုစုေပါင္း ရမွတ္ 174 မွတ္ နဲ႔ ပထမ ေနရာမွာ ရပ္တည္ ခဲ့ ပါတယ္ ။ မက္ဆီဟာ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၉တို႔မွာ အေကာင္းဆုံးပေလးမိတ္ကာဆုကို ရရွိခဲ့တာပါ။ မက္ဆီ ရဲ႕ ေနာက္ မွာေတာ့ ဘာစီလိုနာ အသင္းေဖာ္ေဟာင္း အန္ဒေရ အင္နီေယစတာ က ရမွတ္ ေပါင္း 127 မွတ္ နဲ႔ ဒုတိယ ေနရာကို ရရွိ ခဲ့ ပါတယ္ ။ မက္ဆီနဲ႔ေရာ္နယ္ဒိုၾကားမွာ ဘလြန္းဒီေအာျဖတ္ယူႏိုင္တဲ့တစ္ဦးတည္းေသာကစားသမား လူကာမိုဒရစ္ကေတာ့ 113 မွတ္ နဲ႔ တတိယျဖစ္ပါတယ္။
ထိပ္တန္းကစားသမား ေရာ္နယ္ဒို ကေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္ ရဲ႕ အေကာင္းဆုံး Playmaker ဇယား မွာ 54 မွတ္ နဲ႔ အဆင့္ ၁၂ ေနရာကိုသာ ရယူ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီအေနအထားကလည္း မဆိုးပါဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္ ရဲ႕ အေကာင္းဆုံး Playmaker အေယာက္ ၂၀ကေတာ့ 1. မက္ဆီ – 174မွတ္၊ 2. အင္နီေယစတာ – 127မွတ္၊ 3. လူကာမိုဒရစ္ – 113 မွတ္၊ 4. ကီဗင္ ဒီဘ႐ိုင္းနား – 103 မွတ္၊ 5. တိုနီခ႐ူးစ္ – 90မွတ္၊ 6. အီဒင္ ဟာဇက္ – 77 မွတ္၊ 7. ေနမာ – 71 မွတ္၊ 8. အိုေဇးလ္ – 69မွတ္၊ 9. အန္ဒေရ ပီယာလို – 63မွတ္၊ 10. ယာယာတိုေရး – 60 မွတ္၊ 11. ဇာဗီ – 55 မွတ္၊ 12. ေရာ္နယ္ဒို – 54မွတ္၊ 13. ေဒးဗစ္ ေဆးဗား 52 မွတ္၊ 14. ႐ိုဒရီဂြက္ – 42 မွတ္၊ 15. ရွဝိန္းစတိုင္ဂါ – 40 မွတ္၊ 16. အဲရစ္ဆင္ – 38 မွတ္၊ 17. မာရတ္ဇ္ – 38 မွတ္၊ 18. ေပါ့ဘာ – 35 မွတ္၊ 19. တီယာဂို အယ္ကန္ထရာ– 33 မွတ္၊ 20. အစၥကို – 25 မွတ္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။